သွာသန့်ရှင်းရေး ခေါ် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်း(Dental Scaling) | D Royal Dental Clinic
သွာသန့်ရှင်းရေး ခေါ် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်း(Dental Scaling)
သွာသန့်ရှင်းရေး ခေါ် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်း(Dental Scaling)အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ကျွန်တော် တို့ နေ့စဉ် စားသုံးနေတဲ့ အစားအစာ ကနေ နည်းစနစ်မှန် သွားတိုက်နည်း နဲ့ မတိုက်သော အခါ စားကြွင်းစားကျန် ဖြစ်ပီး တံထွေး ကသတ္တုဓာတ်နှင့်ပေါင်းစပ်သွားသောအခါ သွားနှင့် သွားဖုံးပတ်လည် မှာသွားချေးလွှာ အနေနဲ့ ကပ် ကျန်နေတက်ပါသည်။
အချိန်ကြာလာသောအမျှ သွားချေးလွှာကနေမာကြောသော သွားချေးကျောက် အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။
(2)သွားသန့်ရှင်းရေး ခေါ် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း ။❓❓❓
သွားသန့် ရှင်း ရေး (Scaling) ဆို တာ Ultrasonic Scaler ဖြင့် သွားပေါ်မှာကပ် ညှိစေသော သွားချေးကျောက်များ နှင့် အစွန်းအထင်းများကို တုန်ခါစေမှု ဖြင့် ဖယ်ရှားစေသော ကြောင့်သွားသန့် ရှင်းရေး ဘယ်၂ ခါလုပ် လုပ် သွားကို ပွန်းစေ ပါးစေ တာမျိုး လုံးဝမဖြစ်စေပါ ဘူး ခင်ဗျာ ။
(3)ဘယ်လိုအခြေအနေ မှာသွားကျောက်ခြစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သင့်ပါသလဲ ။????????????
သွားကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် သွားတိုက်လျှင်သွေးထွက်ခြင်း ၊သွားဖုံးများနီပီးရောင်နေခြင်း ၊သွားများယိုင်နဲ့လာခြင်း ၊ခံတွင်းမှအနံဆိုးများထွက်လာပီးကိုယ့်ကိုကိုယုံကြည်မှု အားနည်းလာခြင်း စသည့်လက္ခဏာများ ပေါ်လာလျှင် သွားကျောက်ခြစ်ခြင်း ကိုကုသသင့်ပါတယ်။
အစပိုင်းတွင် သွားဖုံးများနီပီးရောင်လာပါတယ်။အချိန်ကြာလာလျှင် သွား ဖုံး များနိမ့်ကျပီး သွား အမြစ်ပိုင်း ပေါ်လာပါ လိမ့်မယ် ။
သွားအမြစ်ပိုင်းပေါ်တဲ့နေရာ မှာ ရေခဲ ရေ ၊ အအေး သောက်ရင် သွားတွေကျဉ်လာမယ်။အစာ တွေ ညပ် ပီး သွား ပိုးစားလာ မယ် ။
ဒီ ထက် အခြေအနေ ဆိုး ရွားရင် ရေစီး ကမ်းပြို အဆင့်ကို ကူး ပြောင်း လာပါမယ်။
နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့သွား တွေယိုင်နဲ့ ပီး သွား တွေ ဆုံး ရှုံး တဲ့ အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(5)သွားကျဲရခြင်း အရင်း တစ်ရပ် ကလည်း သွားကျောက်တည်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တာကို သင်သိပါသလား။
မကုသပဲထားပါကရေစီးကမ်းပြို ရောဂါဖြစ်လျှင်သွားမြစ်ပတ်လည်တစ်ရူးအစားထိုးကုသမှုလုပ်ပေးရသော ကြောင့်ကုန်ကျစရိတ် လည်းလွန်စွာများ ပြားပါသည်။
မဖြစ်ခင် ကြို တင်ကာကွယ် ခြင်း ကအကောင်း ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ✅✅✅
ပုံ မှန် အား ဖြင့် မိမိသွားသန့်ရှင်းရေး ကို သွားချေး ကျောက်များ ရင်6လ တစ်ခါ လုပ်ပေးသင့်ပီး နည်း ရင် ၁ နှစ် တစ်ခါ ပုံမှန် လုပ်ပေးသင့်ပါကြောင်း တိုက်တွန်း အပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ ။
Chat Box သို့မဟုတ် ????09979005387 09 777 870 880ကို